HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 26-JULY 2021
Monday July 26, 2021 - 08:13:54 in Wararka by Mogadishu Times
RW Rooble Oo Guddi U Magacaabay Xaqiijinta Qoondada Haweenka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa Guddi u magacaa bay u ololeynta iyo xaqiijinta qoon dada haweenka ugu yaraan 30% ee labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka.
Wareegto kasoo baxday Xafi iska R/Wasaare Rooble ayaa lagu magacaabay Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ugu yar aan 30%, kuwaasi oo ka kooban 13-xubnood oo dhammaantood haween ah.
Guddigan ayaa waxaa Guddoomiye looga dhig ay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe, iyagoona ka shaqeyn doona xaqiijinta qoondada matalaadda haweenka ee Goleyaasha Baarlamaanka Feder aalka Soomaaliya
R/Wasaare Rooble iyo Madaxda maamul Gobo leedyada ayaa horey Haweenka Soomaaliyeed uga ballan qaaday in la ilaalin doono xuquuqda ha weenka ee doorashooyinka dalka dhacaya.
Kulan maalintii Dorraad aheyd ay iskugu yimaa deen labada garab ee guddiga doorashada doo rashada Somaliland oo ay kala hogaaminayaan Guddoomiyaha Aqalka Sarre, Cabdi Xaashi iyo R/wasaare ku-xigeenka, Mahdi Guuleed uu kusoo idlaaday fashil, kadib markii la isku fahmi waayay qoddobo uu soo bandhigay garabka Cabdi Xaashi.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Golaha Siya asiyiinta ee Somaliland (GSS) ee uu hogaamiyo Cabdi Xaashi ayaa shaaciyey in shirkii Dorraad ay fashiliyeen garabka uu hogaamiyo Mahdi Guul eed, kaasi oo ay ku eedeeyen inuusan rabin in xal laga gaaro khilaafka doorashada xildhibaanada Somaliland.
"Ajandaha kulanka waxaa ka mid ahaa;- 1.Dhisida maamul wadajir ah (Steering Commi ttee) oo haga doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda GWSL 2.Goobta doorashada iyo amni geeda 3.Habraacyada lagu dooranayo Xildhibaan ada labada aqal ee Somaliland iyo 4.Dib u midaynta guddiga doorashooyinka ee kala qayb samay iyo dhismaha guddoon wadajir ah.”
War-saxaafadeedka GSS ayaa lagu sheegay in Ergadii Golaha Siyaasiyiinta ee Somaliland iyo Guddoomiye Cabdi Xaashi ay shirka la tageen niy ad-sami iyo hindisayaal waxtar leh oo xal lagu do onayey, gaar ahaan dib u midaynta Guddiga Doo rashooyinka SEIT ee kala qaybsan, taasi oo uu ka horyimid garabkii Mahdi Guuleed.
Garabka Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa soo bandhigay in siddeeda xubnood ee heer deegaan doorasho ay dhexdooda iska doortaan guddoonk ooda, sida ku xusan qodobka 6-aad faqradiisa (a) ee heshiiskii madasha, ama in dhismaha guddo onka guddiga heshiis siyaasadeed looga go’aan gaadho si la mid ah heshiiskii Shirka Madasha ee magacaabista xubnaha guddiga.
Sidoo kale waxay soo jeediyeen in guddigu iyagoo mideysan ay yeeshaan guddoon labada dhica ah am isla guddoomin (Co-chair), in lagu he shiiyo in marka uu guddoomiyaha Gudiga dhinac qaato, dhinaca kalena ay yeeshaan Guddoomiye ku xigeenka iyo xoghayaha guddiga (Registrar), haddii sidaa lagu heshiin waayana lagu kala baxo gori tuur.
Mahdi Guuleed iyo xubnihii uga qeyb-galay kulankaas ayaa gebi ahaanba diiday soo jeedim aha kala duwan ee Garabka Guddoomiye Cabdi Xaashi oo ayagu u muuqday kuwa wax looga qa ban karo khilaafka guddiga Somaliland, isla mark aana horseedi lahaa heshiis kama dambeys ah oo lagu soo afjaro xiisadaas.
"Ra’iisul Wasare kuxigeenka iyo kooxdiisa Wa siirrada ah oo marwalba isku halaynaya Madaxw eynaha mudo xileedkiisu dhamaaday, ma aha markii ugu horeysey ee ay fashiliyaan dadaalada xalka loogu baadi-goobayo arrimahan murugsan ee doorashada ee waxay xagal daaciyeen dha mmaan kulamadii ay labada dhinac wada yee sheen.”
"Waxay ka caga jiideen guddiyadii wada jirka ahaa; waxay fashiliyeen waan-waantii ay odayada dhaganku bilaabeen; waxay ka baxayeen is afg arad kasta oo la gaadho; waxay si is-dabajoog ah isu hortagayeen in qodobada laysla afgarto qoraal lagu sameeyo oo dadka loo soo bandhigo.”
Golaha Siyaasiyiinta ee Somaliland (GSS) ay aa ugu dambeyntiina ugu baaqay Ra’iisal wasaar aha in uu la yimaado talo siyaasi ah oo xal u noq da khilaafka kuna dhisan caddaalad, xili uu dhaw aan kulan 3 geesood ah la qaatay Cabdi & Mahdi Guuleed.Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka
Cumar Filish oo faah-faahin ka bixiyey isku dayo la doonayey in lagu dilo
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo Dorraad ka qeyb galay kulan duco ah oo xarunta dowladda hoose ee Xamar loogu sameeyey mas’uuliyiintii laba sano ka hor, 24-kii July 2019-kii lagu qarxiyey xaruntaas, ayaa sheegay in xilligaas kadib la qabtay dad kale oo doonayey inay isaga isku qarxiyaan.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in markii uu yimid xafiiska, si looga badbaado dhibaatadii hore oo kale shaqaalaha dhan la marsiiy ey baaritaan, taas oo sida uu sheegay uu kala kulmay dhale eceyn badan, balse uu ku adkeystay.
"Markii la isoo magacaabay, bal se aana weli xafiiska fariisan wa xaa la ii sheegay in la qabtay dad kale oo loo qorsheeyey inay isku key qarxiyaan, kadib markii aan xafiiska imid dad kale ayaa la qabtay, hey’adaha ammaanka iyo garsoorka ayaana kiiskooda u deynay, dadkeenii waxaa laayey cadaw, welina waa sii wataan howshooda, waxaa la sheegaa in qofkii is qarxiyey uu ka mid ahaa maamulka gob olka, weliba agaasimayaashii xiligaas uu ka tirsa naa,” ayuu yiri Cumar Filish.
"Intii dhimatay Allaha u naxariisto waxaan ku dad aalnay, inta nool dadka sidii aan u ceymin laheyn, waxaan qaadanay go’aan ah dhamaan shaqaala ha gobolka Banaadir in dib loo diiwaan geliyo oo qof macluumaadkiisa oo dhan la soo ogaado, ka dibna damaanad loo sameeyo oo bal qofka la aqoonsado,” ayuu yiri.
Guddoomiyaha G/Banaadir Cumar Filish waxa uu sheegay in diidmo iyo dhaleeceyn badan uu kala kulmay in baaritaan heerkaas ah lagu sa meeyo shaqaalaha, "Dorraad qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha gobolka Banaadir macluumaadkii sa dowladda heysa.” Ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay intii uu xafiiska jo ogay inuu soo iibiyey qalab iskaan ah oo aad u ba ara dadka soo gelaaya xarunta dowladda hoose ee Xamar, sidoo kalena uu sameynay ciidamo na bad sugid ah oo dad ka ku dhex jira, kuwaas oo aan la wada aqoon, dad badana soo qabtay, sida uu sheegay.
RW Rooble Iyo M/Goboleedyada Oo Kulan Ka Yeeshay Khilaafka Arrinta Somaliland
Ra’iisul Wasaaraha X/F/Soomaaliya ee xilga arsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxwe yneyaasha dowlad Goboleedyada ayaa Habeen hore khadka ZOOM-ka kulan gaar ah ku yeeshay.
Inta uu socday kulanka Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda maamulada ayaa waxaa looga hadl ay dardar-gelinta doorashooyinka la filayo inay dalka ka bilowdan & arrinta Somaliland ookhilaaf xoogan uu ka taagan yahay.
Sidoo kale Madaxda ayaa ka wada hadlay hirg elinta soo jeedinta Guddigii dib u heshiisiinta Gobolka Gedo ee Maamu lka Jubbaland iyo xalinta caqabadaha weli ka jira qabsoomida doorashada dhaceysa.
Ilo ku dhow dhow Shirka ayaa sheegaya in Madax da dowlad Goboleedyada ay aad ugu kala aragti duwan yihiin arrinta Somaliland, sida muuqatay ay Madaxda dowlad Goboleedyada xiriiro la kala le eyihiin labada garab ee siyaasiyiinta Somaliland kala hoggaaminayaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed
Kulankaan ayaa waxaa uu kusoo aaday, iya da oo Dorraad markii saddexaad uu dib u dhac ku yimid Doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka FS oo markii hore loo qorsheeyay inay bilaabato 25-ka Julay 2021 oo Dorraad ku beeganeyd.
Dowladda Soomaaliya oo laba Shirkadood kala hadashay Arrimaha Shidaalka
Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane,ayaa kulan fogaan arag ah uga qeybgalay heshiis ay si wadajir ah u galeen labada shirkadood oo ah kuwa ka howlaga dhanka shiidaalka iyo xagga tiknolojiyada.
Kulanka lagu martiqaaday Danjiraha,ayaa yimid xilli ay heshiis wax wadaqabsi ah kala saxiixdeen labada shirkadood ee International Energy Excha nge center (GBA) iyo Ali Cloud.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane oo kulankaasi ku gudbiyay farrin,waxa uu ugu baaqay labada shirkadood in ay ka qeybqaataan horumarka dalka,isla markaa na ay maalgashi ku sameeyaan dalka Soomaal iya. Danjire Cawaale ayaa xusay in Soomaaliya ay ku taallo meel istaraatiiji ah,ayna tahay albaab ka ugu wey n ee kaliya oo laga geli karo dhamm aan dalalka Afrika
Danjiraha waxa uu qiray in labada shirkadood ay heystaan fursado ay wax kula qeybsan karaan dadka Soomaaliyeed,sidaa daraadeed,waxa uu ku taliyay in ay ka faa’ideystaan fursadaha gana csi ee ka jira Soomaaliya.
Labada shirkadood ee International Energy Exchange center (GBA) iyo Ali Cloud,waxa ay ka shaqeeyaan dhanka soo saaridda shidaalka iyo dhinaca tiknolojiyadda aaladaha casriga ah ee Internetka.
Qaar kamid ah Goobaha Ganacsiga M/Jowhar oo xiran
Wararka naga soo gaaraya M/Jowhar ee Caa simadda D/G/Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheeg ayaan inay Dorraad xiran yihiin inta badan Gooba ha Gamacsiga Magaal adaasi.
Tallaabadaan ayay Ganacsatada qaadeen, sida la sheegay kadib markii maamulka degma da Jowhar uu ku amray ganacsatada inay bixiyaan la cago la sheegay in lagu xirayo gooba ha uu ka Fatahay Wabiga Shab eelle ee Magaa lada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga.
Qaar kamid ah Ganacsatada ayaa waxaa ay sheegeen lagu amray in ay bixiyaan lacag u dhax eeysa 20 kun ilaa iyo bo qol kun oo dollar, ia mark aana aysan awooein bixintaas sidaasina ay Shaqa joojinta ku sameeyeen una xireen Gooba hooda Ganacsiga.
Sidoo kale waxaa ay sheegay in iyaga ay da lbadeen inay bixiyaan qeyb kamid ah lacagaha la ga rabo balse Maamulka ay diideen, sidoo kalena Ciidamada Ammaanka ay Shalay ka joojiyeen dibadbax cabasho ah oo ay dhigi lahaayeen.
Gaadiidleyda ka howlgalla Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horay Shaqa joojin u sameeyay, iyaga oo ka cabanayay lacago dheeraad ah oo lagu soo rogay.
Madaxweyne Qoorqoor oo gaaray degaano ku yaalla Galgaduud
Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa degmada Baxdo kula kulmay Odayaasha dhaqanka, waxgar adka iyo Culumaa’udiinka magaalada.
Madaxweynaha ayaa kala hadlay bulshada sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Mudug.
Madaxweynaha ayaa bulshada Baxdo ka xog wareystay xaaladaha amni iyo kuwa bulsho ee magaalada, asagoona kula dardaarmay inay sii joogteeyaan garab istaagga howlgalada Ciidama da qalabka sida ee looga xoreynayo Al-Shabaab deegaanada Galmudug.
Maamulka degmada ayaa sheegay in ay diya ar u yihiin in ay garab siyaan ciidanka maamulka Galmudug.
Mas’uuliyiintii Gedo oo Dorraad si nabad ah uga dhoofay Garoonka Aadan Cadde
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo uu wehliyo taliyaha saldhigga garoonka Aadan Cadde ayaa sagootiyay Cismaan Nuur Xaaji Muc alimu, oo ahaa guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo oo Dorraad gelinkii dambe ka dhoofay ga roonka Aadan Cadde.
Cismaan Nuur Xaaji Mucalimuu oo warbaa hinta garoonka kula hadlay ayaa ammaan iyo mahadnaq u jeediyay Ra’iisul Wasaare Max amed Xuseen Rooble oo uu ku ammaanay talla abooyi nka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay qaa day iyo sida hidadiilada leh ee ku hogaa minayo dalka, gaar ahaan ka miro dhalinta hirge linta door ashooyinka Soomaaliya.
Cismaan Nuur Mucalimuu guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo ayaa dhowaan laga celiyay in uu ka dhoofo garoonka taasi oo keentay in Ra’iisul wasaare Maxamed Xuse en Rooble uu xilalkii ka qaado taliyaha nabad sugidda garoonka iyo agaasimaha shaqaalaha hay’ adda nabadsugidda Qaranka.
Afhayeen Cusub Oo Loo Magacaabay Ciidanka Booliska Dowladda
Taliyaha Ciidanka Booliska DFS Jeneraal Cabdi Xasan Maxam ed Xijaar ayaa Afhay een cusub u magic aab ay Ciidanka Boo liska, kadib wareegto kasoo baxday Xafiis kiisa.
Afhayeenka cusub ee Ciidanka Booliska do wladda ayaa loo magacaabay inuu noqdo Cabd ifataax Aadan Xasan oo bedelaya Afhayeenkii hore ee Ciidanka Gaashaanle Sadiiq Aadan Doo di she oo xilkaas laga qaaday.
Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa faray Afhayeenka cusub ee Ciidamada inuu toos ah u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo idmaday, isagoona Habeen hore Cabdifataax Aadan markii ugu horreeyay la hadlay warbaahinta, kana hadlay Bur cad lasoo qabtay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska DFS ayaa war baahinta uga warbixiya howlgalada ay sameeya an Ciidama da Booliska iyo dhibaatooyinka xiliya da qaarko od ka dhaca Magaalada Caasimadda ee Muqdisho.
Maxkamadda Puntland Oo Xukuno Adeg Ku Riday 9 Nin Oo Howlgal Lagu Qabtay
Maxkamadda darajada 1aad ee M/Garoowe ee Caasimadda Puntland ayaa waxaa ay xukunno ku riday rag farabadan oo lagu helay dembi ah in ay gudaha deegaanada Puntland gelin jireen maandooriyaha khamriga.
Raggaan la Maxkamadeeyay ayaa waxaa ay tirro ahaan gaarayan ilaa 9 nin oo ka wada tirsan aa Shabakad maandooriyaha khamriga gelin jirtay gudaha Pun tland, kuwaasi oo lagu soo qab tay howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen Ciidanka amniga Puntl and.
Qoraal ka soo baxay Maxkamadda M/Garoowe ayaa waxaa lagu shaaciyay in 9-ka Ninka oo qir tay dembiga lagu helay lagu riday xukun ah min lix sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1000 Dollar.
Sidoo kale Maxkamadda ayaa sii deysay oo xo rriyaddiisa dib ugu celisay eedaysane kale oo la gu waayay wax dembi ah, kaasi oo markii hore ka mid ahaa ragga ay soo qabteen Ciidanka amma anka Puntland ee la Maxkamadeeyay.
Howlgalka lagu qabtay 9-ka Nin ee lagu helay inay gudaha Puntland gelin jireen maandooriyaha khamriga ayaa waxaa laga sameeyay tuulo lagu magacaabo Magacley oo ka tirsan degmada Buu rtinle ee Gobolka Nugaal ee Puntland.
Koonfur Galbeed oo Magacaawday Guddi Baarlamaan ee doorashada Aqalka Sare
Guddoomiyaha Baarlamanka D/G/K/Galbeed Dr Cali Saciid Faqi ayaa Dorraad Magacabey Xu bnaha Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Qa bashada Doorashada Aqalka Sare.
Xubnaha Guddiga oo ka kooban 11 Xubnood ayaa waxaa ay iska dhex dooran doonaan Gudd oon, iyaga oo ka Shaqeyn doona sidii Xildhibaa nnada Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed ay u dooran lahaayeen Xildhibaa nnada Aqalka Sare oo dega an doorashadoodu tahay Maa mulka KoonfurGalbeed.
Maamulka K/Galbeed ayaa noqday Maamulkii labaad ee Magacaaba Gud diga Xildhibaannada ee doorashada Xildhibaann ada Aqalka Sare, iyada oo ay horay u Magacaab een Maamulka Jubbaland.
Dorraad oo ku beegan 25/72021 ayaa qorsh uhu ahaa inay bilaabato doorashada Xildhibaan nada Aqalka Sare balse ay dib u dhacday sababo la xiriira dowlad Goboleedyada oo aan badi dha meystirin habraacii loo qaban lahaa doorashada Xildhibaannada Aqalka Sare.
Banaan-baxyo horleh oo Dorraad ka dhacay Muqdisho
Magaalada Muqdisho ee caasimada Sooma aliya waxaa Dorraad markale dibad-bax ballaaran ka dhigay qaar ka mid ah waalidiinta Soomaaliy eed ee caruurtooda askarnimada loogu qaaday dalka Eritrea, iyagoo baaq u diray dowladda dhe xe. Waalidiintan ayaa weli baadi goob ugu jiro wiil ashooda oo war iyo wacaal laga waayey, tan iyo markii loo qaaday dalka Eritrea, waxana cabasha du ay kasii dartay markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in dhalinyaradaas qaarkood laga dag aal-geliyey gobolka Tigray.
Dibad-baxayaasha oo isugu soo baxay isgoys KM4 ee magaalada Muqdisho ayaa ku qelinayey erayo ka dhan ah madaxda muddo xileedkooda uu dhammaaday, waxayna ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen wal-walka waalidiinta e& maqanaashi yaha caruurtaooda.
Sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo la ha dlay warbaahinta ayaa markale ka dalbaday mad axweynaha waqtigiisu dhammaaday inuu soo far a-geliyo arrintan, isla-markaana uu ka hadlo xaal adda ay haatan ku sugan yihin dhalinyaradii Soomaaliyeed ee la geeyey Eritrea.
Baaqan cusub ee kasoo yeeray waalidiinta Soomalaiyeed ayaa kusoo aadaya, iyada oo laga cabsi qabo in markale uu dib u qarxo dagaalka go bolka Tigreey ee u dhexeeya dowladda federal ka ah ee Itoobiya jabhadda hubeysan ee TPLF oo dib u qabsatay degaano hor leh.
Dibad-baxan ayaa sidoo kale wuxuu imaanay aa, xilli aysan weli wax shaqo ah qaban guddigii uu ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble u xil-saaray cabashada waalidiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa caruurtooda tababar ahaanta lo ogu qaaday dalka Eritrea.
Si kastaba dowladda federaalka ah ee Soomaa liya ayaan weli jawaabin rasmi ah ka bixin cabash ada kasoo yeereysa waalidiintan oo ah mid soo noq-noqotay, marka laga reebo hadallo ay mas’uu liyiin ka tirsan DFS ay u mariyeen dhanka warba ahinta.Xigasho:-Caasimada.Net
Gabar Soomaali la la’aa oo meydkeeda laga helay Magalada Minneapolis
Gabadhaan oo lagu Magacaabi jiray Muniiro Ax med ayaa muddo Saddex Cisho ah ka maqneyd Qoyskeeda, hayeeshee baadi goob dheer kadib waxaa meydkeeda laga helay webiga Mississippi ee hoos mara buundada dadka ay u damaashaad tagaan ee Magaalada Minneapolis , halkaas oo ay joogtay markii cid war ugu dambeeysay.
Ciidanka gargaarka deg-degga ah iyo booliiska Magaalada Minneapolis ayaa meydka Munira ka soo saaray webiga Mississippi, waxaa na ay sheegeen inay wadaan baarita an la xiriira dadka ka dambeeyay dilk eeda ama inay iyada Webiga ku dhacd ay.
Qaar kamid ah Qoyska Alle ha u Naxariistee Muniira ayaa dhankooda sheegay inay u maleeyn ayaan in Gabadhooda Webiga lagu riday, hayee ehee ay jawaab deg deg ah ka sugayaan Ciidam ada Booliska ka howlgalla Magaalada Minneapo lis ee dalka Mareykanka.
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanadi hii ugu dambeeyay waxaa siyaabo kala duwan lo ogu dilay Magaalada Minneapolis, iyada dilkaan kii ka horeeyay loo geystay todobaadkii hore Muw aadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Xuseen Xasan.
4 Qodob oo lagu Xallin doono Khilaafaadyada Doorashada Aqalka Sare oo la Shaaciyey
War-saxaafadeed ka soo baxay Guddiga Xalli nta Khilaafaaadka doorashada dadban ka dhace ysa ayaa soo saaray habraaca xallinta khilaaf aadka doorashada Senatorrada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmaha soo socda ay doorashadoodu ka bilaabaneyso xarum aha dowlad goboleedyada dalka.
"Guddigu wuxuu la wadaagayaa Musharaxiinta iyo Codbixiyaasha Aqalka Sare Habraaca Xallinta Khilaafaadka Doorashada Aqalka Sare ee Baarl amaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soom aaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Guddiga ayaa qoraalkaan ku soo bandhigay cidda ay cabashadooda qaabilayaan iyo shuruuda ha looga baahan yahay, waxayna ku soo koobeen afar qodob oo kala ah:
1- Musharax soo buuxiyay shuruudaha Musharaxnimada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku xusan Qodobka 58 aad ee Da stuurka ku-meel gaarka ah ee dalka iyo Sharciy ada kale ee Hagaya Doorashada Dadban ee 2020/2021, loona diiwaan galiyay u tartamida Aqa lka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee Somaliya.
2- Waxaa kaloo cabasho u soo gudbin kara Guddiga Xallinta Khilaafaaadka Doorashada Da dban Xildhibaanada dowlad goboleedyada iyo xu bnaha Ergada loo xulay in ay u codeeyaan tartam ayaasha Aqalka Sare ee Somaliland oo ay si toos ah u saamayso xad-gudubyada ka dhasha maamulka doorashada.
4- Waa in uu bixiyaa lacagta diiwaan galinta cabashada oo dhan 3,000 oo dollar (sedex kun oo dollar) kuna soo lifaaqaa galkiisa cabashada war aaqda cadeyneysa in uu ku shubay lacagta xis aabta bangiga loo asteeyay.
"Haddaba intaas oo shuruud ah haddii uu soo buuxiyo qofka cabanaya, Guddigu wuxuu qadan ayaa go’aan uu ugu garnaqayo cabashadaas mud do 7 malmood gudahood ah,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaan ka soo baxay Guddiga Xallinta Khilaafaaadka doorashada dadban
Al-Shabaab Oo Weerar Dhabba-Gal Ah Ku Dishay Askar Kenyaan Ah
Kolonyo ay la socdeen Ciid amo ka tirsan kuwa Milateriga dowladda Kenya ee qeybta ka ah how lgalka AMISOM ayaa waxaa gel inkii dambe ee Dorraad weerar dhabba-gal lagula eegt ay dega an ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose. Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaaw ac ayaa lasoo weriyay inuu ka dhashay weerarka as lala eegtay Ciidanka Kenya oo ku socdaalayay inta u dhexeeysa deegaanada Kulbiyoow iyo Raa s-kamboonin ee Jubbada Hoose. Al-shabaab wa rar ay ku qoreen barahooda dhinaca Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen Mas’uuliyada weer arka Jad-galka ee lala beegsaday kolonyada ay la socdeen Ciidanka Kenya, iyagoona xusay inay ku dileen 7 askari Kenyaan ah, halka tirro kalena ay ku dhaawaceen.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Ciidamada Kenya ee la weeraray ay sahay isu gu kala gudbinayeen deegaanada Kulbiyoow iyo Raas-kamboonin ee Jubbada Hoose, waxaana weerarka kadib la tilmaamay inay socdaalkooda horey u sii wateen.
Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay Talis ka Ciidanka Milateriga dowladda Kenya oo ay uga hadlayaan weerarkii khasaaraha geystay ee ka dhacay Jubbada Hoose. Al-shabaab horey marar kala duwan weeraro ku qaaday Ciidanka Kenya oo socdaalo ku marayay degaano ka tirsan Gobol kaas.